Wararka Suuqa Caawa: Shaqo ka Ceyrinta Ole Gunnar Solskjaer, Go’anka Zinedine ee Shaqada Manchester United iyo Qodobo kale | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Wararka Suuqa Caawa: Shaqo ka Ceyrinta Ole Gunnar Solskjaer, Go’anka Zinedine ee...
Wararka Suuqa Caawa: Shaqo ka Ceyrinta Ole Gunnar Solskjaer, Go’anka Zinedine ee Shaqada Manchester United iyo Qodobo kale
Zinedine Zidane ayaan wax xiiso ah u qabin shaqada Manchester United inkasta oo lala xiriirinayo Old Trafford, Tababarihii hore ee Real Madrid ayaa ka mid ah magacyada loo malaynayo inuu yahay bedelka macallin Ole Gunnar Solskjaer, kaasoo booskiisu uu yahay mid aad u liita ka dib markii ay Liverpool 5-0 ku xasuuqday Axaddii. sidaas waxaa qortay Mundo Deportivo.
Red Devils ayaa laga yaabaa inay isbedel sameyso ka hor inta aysan usbuuca u safrin Spurs Manchester United ayaa ka fiirsaneysa inay ceyriso tababare Ole Gunnar Solskjaer, sida laga soo xigtay Manchester Evening News.
Red Bull Salzburg ayaan wax niyad ah u haynin inay iibiso xiddiga Karim Adeyemi bisha Janaayo, 19 jirkaan ayaa dhaliyay 14 gool 18 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan si uu u soo jiito kooxo badan oo Yurub ah. sida laga soo xigtay Sky Germany.
Ronald Koeman ayaan halis ugu jirin in la ceyriyo inkastoo Barcelona ay guuldarro ka soo gaartay Real Madrid, inkastoo seddexda kulan ee soo socota ay muhiim u yihiin mustaqbalkiisa, Marca ayaa ku warameysa in madaxda Barca, ay ka niyad jabeen natiijada, aysan dareemin in qaab ciyaareedkii El Clasico uu ahaa mid liita. Sida laga soo xigtay Marca
Tababaraha Red Devils ayaa lumiyay taageerada qolka labiska, Ole Gunnar Solskjaer ayaa u halgamaya sidii uu shaqadiisa u badbaadin lahaa iyada oo ciyaartoy badan oo Manchester United ahi ay lumiyeen kalsoonida awoodaha tababaraha Norway, sida laga soo xigtay ESPN.
Arsenal ayaa diyaar u ah inay tijaabiso go’aanka Real Betis iyadoo dalab ka gudbineysa bisha Janaayo ciyaaryahanka qadka dhexe William Carvalho, Xiddiga reer Portugal ayaa u muuqday inuu ka tagayo Betis xagaagii hore laakiin ugu dambeyntii wuxuu sii joogay kooxda wuxuuna ku qasbay inuu dib ugu soo laabto kooxda intii lagu jiray dhowrkii toddobaad ee furitaanka xilli ciyaareedka. sida ay qortay Fichajes.
Manchester United ayaa u calaamadsatay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Ajax Ryan Gravenberch inuu yahay bedelka Paul Pogba, Pogba ayaa qandaraaskiisu dhacayaa dhammaadka xilli ciyaareedkan welina ma ballan qaadin heshiisyo cusub, taasoo la micno ah in United ay sameyneyso qorshayaal ku -meel -gaar ah haddii xiddiga heerka caalami ee dalka France uu boxo. sida laga soo xigtay Todofichajes.
Newcastle ayaa ka fiirsaneysa inay bisha Janaayo u dhaqaaqdo xiddiga qadka dhexe ee Aston Villa Marvelous Nakamba, Magpies-ka ayaa lagu wadaa inay noqoto mid ka mid ah naadiyada ugu mashquulka badan suuqa jiilaalka ka dib markii ay la wareegeen Sucuudiga waxayna qadka dhexe ka dhigeen meel muhiim ah oo u baahan xoojin. sida laga soo xigtay Football Insider.
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa isha ku haya inuu u dhaqaaqo xiddiga qadka dhexe ee Borussia Monchengladbach Denis Zakaria, Macalinka reer Spain ayaa aad ula dhacsan 24-jirkan, kaasoo qandaraaskiisa haatan ee Borussia-Park uu dhacayo xagaaga dambe. sida laga soo xigtay Calcio Mercato .
Previous articleChelsea oo qarka u saaran inay heshiis cusub ku abaal mariso daafaca Trevoh Chalobah
Next articleKu Dhawaad 9 Askari oo Boolis oo lagu Dhaawacay Ka hor iyo kadib Ciyaartii PSG iyo Marseille
Xagee ayey marayaan wada-hadallada lagula jiro Ahlu Sunna?
Ciidanka DANAB oo howlgal qorsheysan ku dilay xubno ka tirsan kooxda...
Buurmadow oo amaanay Godane, kuna tilmaamay Al-Shabaab ‘dowlad’ + Video
Real Madrid oo isku diyaarinaysa inay iibiso afar ciyaartoy bisha January.